मेरो बाल्यकालसँग जोडिएको जनयुद्द : यसरी म मिलिसिया लडाकू बनें « Karobar Aja
मेरो बाल्यकालसँग जोडिएको जनयुद्द : यसरी म मिलिसिया लडाकू बनें
अशोक शर्मा भट्ट ‘क. किशोर’
म मेरी आमासँग खेल्दै रमाउने गर्थे, आमाको गाली पिटाई पनि प्यारो लाग्यो । कहिलेकाहिँ त स्कुल छोडेर बुढीगण्डकीमा पौडी खेलेर आउने पनि गरिन्थ्यो । स्कुल जाँदा कहिले कहिले मकै पिस्न मेलमा लैजाने पालो सँधै मेरो नै पर्ने गर्थ्यो । साथीहरुसँग मिलनसार भएर मित्रता गर्ने र खेलहरुमा विशेष चासो राख्ने मेरो बानी थियो ।
घरमा हुने फलफुल कसैले नदेखेको बेला सबै जसो बढि पनि दिन्थे । भाईबहिनीको सिंगारपटारदेखि स्कुल ल्याउने लैजाने जिम्मा पनि बहन गर्नुपर्ने म घरमा आमालाई सघाउने मकै गोड्ने भैँसीलाई पानी दिने, घाँस काट्ने काम गर्न पनि पछि पर्दिनथे । घरमा आउने पाहुनालाई विशेष सत्कार गर्ने मेरो राम्रो बानी थियो ।
समय २०५२ सालको हो, मेरो दाईलाई केही मान्छे खोज्दै आए, हिउँदको बेला भएकाले खासै घरमा काम थिएन । म केही साथीहरुसँग खेल्न नदीको किनार गएको थिए । किनारामा नै पुगेर दाई कता छन् भन्दै सोधे । मैले भने दाई बुबालाई भेट्न बजार जानुभएको छ ।
मेरो बुबा मालपोतमा जागिरे हुनुहुन्थ्यो । एउटा दाई बुबासँग बस्थे भने अर्को चाहिँ कहिले गाउँ कहिले सहर गर्थे । बाटैबाटामा म उनीहरुसँग नजिक भएसँगै भलिबल खेलियो । रात परेपछि उनीहरु ल’ बाबु फेरी आउँला दाईलाई भनिदिनु भन्दै गए ।
आमा कहिलेकाहिँ भन्नुहुन्थ्यो । खासमा आउने पाहुना भगवान हुन् सत्कार गर्नुपर्छ, अनि उनीहरु भन्थे आमा हामीलाई पराई होइन छोराछोरी भन्नु । पाहुना बनाए हामी कहिल्यै आउँदैनौं । विचरी मेरी आमा रुँदै भन्नुहुन्थ्यो बाबु नानी मेरो आड आदर आफ्नो भन्ने कोही छैन । नदिको छेउको एक्लो घर आँगनबाट लाश जलाएको देखिन्थ्यो । मेरो बुबाको भाईहरु यति काइदा थिए कि हामीलाई एक्लै पाए मार्न पछि नपर्ने । आफ्ना छोराछोरीलाई उस्काएर गाउँमा मोही लिन जाँदा बाल्टीमा पिसाब फेर्नसम्म पछि परेनन् ।
अरुलाई उक्साएर घरमा कुट्न आउने, मकैबारीमा गाईवस्तु चराइदिने जस्ता काम उनीहरुको लागि सामान्य नै थियो । आमाहरुलाई उनीहरुको त्यो आड उति नै भरोसा मन हुँदै गयो । हामी ति अपरिचित मान्छेहरुसँग यति नजिक भयौं कि सिमा नै भएन् ।
म धेरै सानो भएपनि कसै कसैले तँ साथी जस्तो मान्छे छस् । कहिलेकाहिँ मेरो बुबालाई सेनाले उपहार भनेर रातो तारबाल सिपाही जस्ता उपन्यासहरु दिन्थे । अति नै रोचक तरिकाले पढ्ने गर्थे । अनि म सँग भलिबल खेल्न आउने मेरा साथीहरुलाई चोर पुलिस खेल खेलाउँथे । कहिले देश परिवर्तनका कुरा गर्थे ।
प्राय:जसो सबैलाई मेरो भाईहरु ठूलो भएपछि के बन्ने भन्ने गर्थे । मेरो जवाफ सँधै आर्मी अफिसर या खेलाडी भन्ने गर्थे । अनि भन्ने गर्थे शाही सेना हैन जनसेना जनताको आर्मी बन्नुपर्छ ल भन्थे, अनि म हुन्छ । म धेरै पढेर दाईलाई भन्थे, उनीहरुबाट फेरी जवाफ आउँथ्यो, बाबु पढेर मान्छेले केही गर्न सक्दैन्, अक्षर चिने पुग्छ यो बुर्जुवा व्यवस्था नै खराब छ ।
म अघि अघि उनीहरु पछि पछि ५ कक्षामा पढ्ने म सानो फुच्चे मेरो भरमा उनीहरु हिँडेको देख्दा त कहिलेकति डरपक रैछ भन्थे कहिले किन होला सोच्थे । लाइट नबाली नबोली हिँड्नुपर्ने कहिले खोलामा परिन्थ्यो त कहिले ढुंगामा ठोकिन्थ्यो । कहिले हातमा चोट त कहिले खुट्टामा चोट लाग्ुन मेरो लागि सामान्य भइसकेको थियो ।
करिब २ घण्टाको रातको यात्रापछि मैदी पुगियो । मलाई धन्यवाद् बाबु तिमी जनताको आर्मी हुनुपर्छ भने, ल दाई भनेर म कुलेलाम ठोके । सालघारी घनाजंगल कतै नरोकी किन ठेस लाग्दा पनि बाल नगरी म घर आएर सुतें । सँधै जस्तो घरको काम सकोस्, स्कुल गए स्कुलमा गएर कुरा हुन थाल्यो । मेरो दाई माओवादी गुरिल्ला हुन् अरे पुलिसले माओवादीलाई र गुरिल्लालाई मार्छ अरे समातेर कुट्ने हातखुट्टा भाँच्ने गर्छ अरे मेरो दाईलाई पनि माओवादी भनेर समातेको छ अरे हामीलाई थाहा थिएन दाई माओवादीसँग नजिक भएको रहेछ ।
गोरखा बजार आउँदा जाँदा जनादेश भन्ने पत्रिका र माओवादीका कागजपत्र बोक्दो रहेछ । बतासेको दंगा प्रहरीले समातेर हातखुट्टा भाँचेर लगेको छ भन्ने सुने म स्कुलको पढाईको मतलब नगरी घर फर्किए । बाटोमा आमा रुँदै जानुभएको रहेछ, बाबु भाईबहिनीलाई राम्रोसँग हेरविचार गरेस् भन्दै मलाई सुम्सुम्याउँदै आमा रुँदै जानुभयो । यो घटना २०५४ सालतिर को हो । म रुँदै घर पुगेपछि शायद दुखको कुनै सिमा भएन । हिजो घरमा आउने सबैलाई दाईको बारेमा थाहा हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो ।
मैले गर्न सक्ने भनेको रुनु शिवाय अरु केही थिएन । आमा साँझ आउनुभएन । राती १२ बजेसम्म आमा आउनुहोला भन्दाभन्दै बाहिर पिँढीमा म मेरी ठूलो भाईबहिनी र कान्छो भाई निदाएछौं । ढोका खुल्लै रहेछ, राति करिब २ बजेतिर २०/२५ जना को टाटेपाटे लुगा लगाउनेहरु मान्छेहरु आए कोही चक्लेट दिएर सोध्छ हाम्रो साथीहरु कहाँ छ, कोही लौरा र राइफल हानेर सोध्दै को को आउँछ, क–कसलाई पाल्छस् ?
धेरै बेरसँग रोएँ , अनि खाना खाएर सुतें भोलिपल्ट १० बजेतिर उठिएछ । भैंसी बाख्रा कराउँदै थिए, केही गर्न मन थिएन केही बेरपछि गाउँका एक जना दाई आउनुभयो । बाबु पिर नगर आमा आउनुहुन्छ दाईलाई हामी लिएर आउँछौं नरोऊ हामी छौं भन्नुभयो । कोही आयो सोध्यो भने हाम्रो घरमा कोही आउँदैन भन्नु हामी कसैलाई चिन्दैनौं भन्नु ल भन्नुभयो ।
मैले हुन्छ भने , त्यसपछि दाई जानुभयो घरको काम गरेर भाईबहिनीलाई खाना खुवाई गरे आमा आउनुभएन । २ दिनपछि आमाबुबा रुँदै आउनुभयो । मैले आजसम्म जीवनमा बुबालाई २ पल्ट रोएको देखेको छु ।
त्यो पीडा मेरो लागि धेरै ठूलो पीडा बनेको छ । बुबाआमा फेरी जानुभयो । दाईलाई ल्याउन सकिन्छ कि भनेर धेरै कोसिस गर्नुभयो सकिएन् । हुँदाहुँदै महिनै बित्यो फेरी पुरानो तरिकाले हाम्रो दिनहरु बित्न थाल्यो दाईलाई गोरखा जेल चलान गर्यौ । साथीहरु आउँदा राम्रो व्यवहार गर्नु, पुलिसलाई केही नभन्नु आमाको एउटै कुरा हुन्थ्यो बाबु छोड्दे सबै । तिमीहरु ५ भाई छौ अरु किन खोज्छस् बुबा भन्नुहुन्थ्यो । जे भयो भयो अब राम्रो सोच दाई ल हुन्छ भन्यौं । तर म सँग साथीहरुको बारेमा सोध्ने गर्उयौं म भन्थे ।
चिठी आदान प्रदान पनि गरें, मैले स्कुलमा माओवादीको भाई भनेर कुटाई खाए, अनि बुबाआमाले गोरखा बजारमा सबैलाई पढाउने निर्णय गर्नुभयो । भाई बहिनी र म गोरखा बजार गयौं । आमा एक्लै गाउँको घरमा हुनुहुन्थ्यो । एउटा दाई बुबासँगै गोरखामा बस्ने गर्यौ । अर्को जेलमा ।
कहिले पिंडालुभित्र बम छ भन्दै काट्ने, कहिलेकाहिँ घिउको बाल्टीमा बम छ भन्दै राइफल गाडिदिनेसम्म मेरो लागि सामान्य थियो । करिब २ वर्षको जेल बसाईपछि बुबाले दाईले धरौटीमा छुटाउनुभयो । दाई निस्केपछि हामी खुसी थियौं, दाई निस्केको केही दिन घर बसेर बुबा जानुभयो । मलाई दाईसँग आइज भन्नुभयो । दाई र म गोरखा बजार जाँदै थियौं १ घण्टा जति हिँडेपछि एक जना मान्छे भेट भयो । अभिवादन कमरेड भन्यो, तपाई जानुपर्यो, तपाईंको धेरै लगाव छ नछोड्नु । आन्दोलन हाम्रो मुक्तिको लागि हो भने दाईले मलाई भने म जान्छु तँ जा ल भन्नुभयो ।
हुन्छ भने मेरो लागि अरु कुनै बाटो थिएन ।२०५६ सालतिरको कुरो हो, बुबाले बेलुका मलाई दाई खोई भनेर सोध्नुभयो, मैले साथीहरुसँग गएको छ, आउँछ होला भने । दिन अनि रात गर्दै धेरै दिन रात बुबाले सोध्नुभयो, खै त खै त केही दिन पछि म गाउँ गए । घरमा आमालाई भेट्न । केही मान्छेहरु घरमा थिए घरको बार्दलीमा ६/७ वटा जति हतियार राखेको रैछ, मलाई डर लाग्यो ।
सबै जना हरियो पोशाकमा थिए । साथमा बन्दुक थियो । नारायण उपाध्यय, कमरेड दिपकसँग आउने धेरैलाई म त्यहाँ देख्दै थिएँ । मलाई चम्कीलो तारावाल सिपाही किताब दिने दाई थिए । त्यो पढेर मैले उनीसँग जनवाद कहिले आउँछ ? भनेर सोध्दा उनको जवाफ थियो, मैदीको जंगलतिर देखाएर बाबु त्यो पारी पाखामा राता फूलहरु फुलेपछि बिहानीको सूर्यले जनबोली बोलेपछि… मलाई त्यो दिन आज पनि या छ मेरो आमासँग बासी भात मागेर खाएर गएका ।
केही समयपछि फेरी पुलिसको पिटाई खानुपर्यो, त्यसपछि मैले निर्णय गरें कि मरियला कि मारिएला ? माओवादी हुनुको अर्को विकल्प छैन् । सामन्ती दलाल पूजिँवादीको विरुद्द म पनि लडाईं लड्छु । भरौटेहरुलाई सखाप पार्छु भन्दै मेरो माओवादी मिलिसिया जीवन शुरु भयो ।
(लेखक : पूर्व माओवादी लडाकु हुन् । )